Ny siny fandavahana anay - Omeo antoka ny kalitao sy ny faharetany
XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTD. miorina ao an-tanàna malaza indrindra Xuzhou milina fananganana. Amin'ny maha-mpanondrana matihanina amin'ny asa fanorenana sy kojakoja fanamoriana, Minyan dia manana traikefa ara-barotra mandritra ny taona maro ho an'ny milina fananganana any Shina, manana traikefa sy reso betsaka ...Hamaky bebe kokoa »
Inona ny fanasokajiana sy ny asan'ny siny
Miasa amin'ny fotoana samihafa ny mpitrandraka ary hisafidy kojakoja fampitaovana isan-karazany, kojakoja iraisana toy ny siny, mpanapotipotika, mpangalatra, fametahana hydraulic sns. Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo kojakoja mety fotsiny ihany, no ahafahantsika mahazo fahaizana miasa haingana sy mahomby amin'ny va ...Hamaky bebe kokoa »
Ny bucket dia manondro mpikambana miendrika siny ampiasaina mba hakana fitaovana malalaka toy ny tany, fasika mavo, vato ary fako fanamboarana. Izy io dia misy lovia ambany, takelaka rindrina, lovia sofina, lovia sofina, lovia nify, lovia eo anilany, ary nify siny. Izy io dia karazana fitaovana miasa ...Hamaky bebe kokoa »